Malunga nathi - i-Hot Electronics Co, Ltd.
Umboniso omncinci we-Pixel Pitch LED
Ufakelo oluLungisiweyo lweMiboniso ye-LED
Ukubonisa okungahambelaniyo kwe-LED
Umboniso we-Mesh LED
Ibala lokujikelezisa i-LED
Umgangatho woMdaniso we-LED
IHot Electronics Co, Ltd.zinikele kwimveliso ekumgangatho ophezulu ye-LED yoyilo kunye nemveliso ngaphezulu kweminyaka eli-18.
Ixhotywe ngokupheleleyo liqela leengcali kunye nezixhobo zangoku zokuvelisa iimveliso zemiboniso ye-LED, ii-Electronics eziShushu zenza iimveliso ezifumene ukusetyenziswa ngokubanzi kwizikhululo zeenqwelo moya, kwizikhululo, kumazibuko, kwiziko lomthambo, kwiibhanki, ezikolweni, ezicaweni, njl.
Iimveliso zethu ze-LED zisasazeke kumazwe ali-100 kwihlabathi liphela, zigubungela iAsia, Middle East, Melika, iYurophu neAfrika.
Ukusuka kwibala lezemidlalo ukuya kwisikhululo seTV, ukuya kwinkomfa nakwiminyhadala, ii-Elektroniki ezishushu zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokutsala amehlo kunye nezisombululo zombane ze-LED kwimarike zorhwebo, ezorhwebo nezikarhulumente kwilizwe jikelele.
Siya konwaba ngakumbi ukuyila isikrini esenziwe ngokwezifiso ze-LED kunye nesisombululo kunye nawe. Nokuba isetyenziselwa ukwenza uphawu, intengiso, ukonwabisa okanye ubugcisa, ii-Elektroniki ezishushu ziya kukubonelela ngesisombululo se-LED esiya kuqinisekisa ukuba utyalomali lwakho lukunceda kwiminyaka ezayo.
Yiba ngumenzi wokuqala wemveliso ye-LED
Yiba sisiseko semveliso ekhokelayo kwimveliso ye-LED
Yiba yingcali yemveliso ye-LED yokuyila, ukuphanda, ukuphuhlisa, ukulawula inkqubo.
IHot Electronics Co., Ltd. yinkxaso yeHongkong Tian Guang Electronics Co., Ltd., eyasekwa ngo-2003, kwaye inembali emalunga neminyaka eli-18. IHot Electronics Co, Ltd.yinkampani ekumgangatho ophezulu wobugcisa egxile kuphando nakuphuhliso, imveliso kunye nenkonzo yeemveliso zokubonisa ze-LED.
IHot Electronics Co, Ltd ngumnikezeli ophambili weemveliso zesicelo se-LED kunye nezisombululo phesheya. Sine-R & D epheleleyo, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nenkqubo yenkonzo. Sizimisele ekunikezeleni ezikumgangatho ophezulu kunye nokusebenza eliphezulu iimveliso ukubonisa LED kunye nezisombululo kubasebenzisi ekhaya nakumazwe aphesheya. Okwangoku, iimveliso ikakhulu zigubungela umbala ogcweleyo okhokelwe kwiscreen, umbala ocekeceke opheleleyo okhokele isikrini, ukurhola isikrini esikhokelayo, inkcazo ephezulu yeepikseli encinci kunye nolunye uthotho. Iimveliso zithengiswa eYurophu naseMelika, kuMbindi Mpuma nakwamanye amazwe nakwimimandla. Isetyenziswe ngokubanzi kwiindawo zemidlalo, unomathotholo nomabonwakude, amajelo osasazo oluntu, imakethi yokuthengisa kunye nemibutho yezorhwebo kunye namalungu karhulumente nakwezinye iindawo.
IHot Electronics Co, Ltd.yinkampani eneenkonzo zamandla kwaye ingene kuluhlu lweqela lesine lenkampani yolondolozo lwamandla kwiKhomishini yoPhuculo yeSizwe kunye noHlaziyo. IHot Electronics Co, Ltd. ineqela lezentengiso elinamava abanzi e-EMC kunye neqela elilawulayo ekumgangatho ophezulu ukubonelela abathengi ngophicotho-zincwadi lwamandla, uyilo lweprojekthi, inkxaso-mali yeprojekthi, ukuthengwa kwezixhobo, ukwakhiwa kobunjineli, ukufakwa kwezixhobo kunye nokuyalelwa, kunye noqeqesho lwabasebenzi .
Ngo-2009, i-Hot Electronics Co., Ltd. yonyulwa njengeyunithi yentsebenziswano yeprojekthi "yeNkqubo ye-863" yesiCwangciso seShumi elinesihlanu leminyaka. Ukongeza, iiprojekthi zenkampani yethu ezinxulumene nokubonisa i-LED ziye zalinganiswa "kwiProjekhthi eziPhezulu zezoShishino ezingama-500 eGuangdong" kunye "neeProjekhthi eziPhezulu zezoShishino zale mihla ezingama-500 eGuangdong" yi "Number One Project" yamashishini avelayo acwangcisiweyo eKomiti yeQela lePhondo laseGuangdong nakwiPhondo. Urhulumente.
Ngo-Agasti ka-2010, i-Hot Electronics Co., Ltd. yasungula iZiko le-Shenzhen yeTekhnoloji yoPhando lobuNjineli noPhando lweZiko njengenkokeli kunye nenkokheli yezobuchwephesha kumzi mveliso we-LED eShenzhen, kwaye yamkelwa yiShenzhen yezeNzululwazi kunye nezoShishino lweTekhnoloji kunye neKomiti yezoRhwebo nezoLwazi.
Ngo-2011, i-Hot Electronics Co., Ltd. yasungula i-ofisi yorhwebo lwangaphandle e-Wuhan, eHubei.
Ngo-2016, i-Hot Electronics Co., Ltd. i-LED Display P3 / P3.9 / P4 / P4.8 / P5 / P5.95 / P6 / P6.25 / P8 / P10 njl njl fumana izatifikethi ze-CE, zeRoHS.
IHot Electronics Co, Ltd.yenze iiprojekthi kumazwe ali-180 kwihlabathi liphela. Phakathi kwabo, kwi-2016 kunye ne-2017, izikhululo ezibini zikamabonwakude zazisekwe kwisikhululo sikamabonwakude eQatar, sinendawo eyi-1 000 yeemitha zesikwere.
Iklabhu, ibala lezemidlalo, izikwere zenkcubeko, izitalato zorhwebo, indawo yolonwabo, inqanaba lobugcisa, amaziko emiboniso, ukubekwa komhlaba edolophini, amashishini kunye namaziko, ezolawulo nezinye iinkalo.
Injongo Service: Fast, Ngexesha, Customer kuqala
1.Ukubuza simahla ngaphambi nasemva kokuthengisa. 2. Iwaranti: iminyaka emi-2. 3. Gcina ulungise. Phendula kwangexesha (kwiiyure ezi-4). Ukulungisa ngaphakathi kweeyure ezingama-24 ukusilela okuqhelekileyo, iiyure ezingama-72 ngokusilela kokuyeka. Gcina rhoqo. 4. Nikezela ngee-spare parts kunye ne-technical toll for ixesha elide. 5. Inkxaso yetekhnoloji yamanyathelo abalulekileyo neeprogram. 6. Ukuphuculwa kwenkqubo yasimahla. 7. Uqeqesho lwasimahla.
1. Uthethathethwano ngeProjekthi 2. Ingcebiso yolwakhiwo lolwakhiwo 3. Umncedisi wofakelo lwesiza 4. Injineli yoqeqesho lokusebenza rhoqo
Isiqinisekiso seminyaka emibini: Kwiminyaka emi-2 yesiqinisekiso sexesha, nayiphi na into yokusilela iyatshintsheka simahla hayi ngenxa yesizathu esisetyenziswe gwenxa. Emva kweminyaka emi-2, kuphela iindleko zeendleko ziya kuhlawuliswa.
Ngokweendlela zokupakisha ezahlukeneyo ezahlukeneyo, Ukupakisha ibhokisi, ukupakisha imeko yenqwelomoya.
Ifowuni: +86 189 2647 7587
Ummandla woShishino waseHongDa, iTianXin Road, iShiyan Town, iSithili saseBao'an, isixeko saseShenzhen, China.
Inkonzo yabathengi ekwi-Intanethi
Inkqubo yeenkonzo zabathengi kwi-Intanethi